मैना धिताल - कान्तिपुर समाचार
मैना धितालका लेखहरु :
बूढो हुँदा बोझ !
उमेर पाकेर स्वदेश फिर्नेप्रति कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तीतो अभिव्यक्ति पोख्ने गरिएको पाइन्छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूको तर्क हुने गरेको छ— युवा उमेरको ऊर्जाशील समय विदेशमा बिताएर फलानो ‘बूढो’ ज्यान लिई देशको ‘बोझ’ बन्न फर्कियो ।
संसारमा दुःख गर्न नखोज्नेहरू असंख्य होलान् । तर, पैसा कमाउन नचाहनेहरू भने विरलै भेटिएलान् । नेपाली मात्रै हैन, संसारभरि नै मानिस पैसाकै लागि धर्तीका कुनाकाप्चा पुगेका छन् । यसो हेर्दा लाग्छ, पैसा बढ्नु भनेको मान्छेको खुसी बढ्नु हो । तर के आम्दानी बढ्दै जाँदा खुसीको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ ? अझ भनूँ, कति पैसा भयो भने मान्छे खुसी होला ?
कोभिड महामारीपछिको डिजिटल अर्थतन्त्र
महामारीले ल्याएको एउटा सकारात्मक परिवर्तन मान्नुपर्छ— चाहेर होस् वा नचाहेर, प्रविधि खास गरी डिजिटाइजेसनमा जान कर लागेको छ । भुक्तानीदेखि डेलिभरीसम्म । मार्केटिङदेखि प्रशासनिक रेकर्डसम्म । इन्स्योरेन्स कम्पनीदेखि वित्तीय बजारसम्म । सबैले यतिखेर स्वचालित प्रविधिमार्फत सेवा दिन थालेका छन् । व्यापार–व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन् ।